Kusukela ezinsukwini zeSoviet Union, inhloko-dolobha ye-Ukraine - Kyïv idolobha - lizwe besilokhu sibhekwa njengesibusiso ozimele sokukhanda. Kunezindlela eziningana amanyuvesi ezahlukene, lapho izigidi zabafundi wavuma unyaka ngamunye. Ingabe ayikho into okuthiwa ihlukile Kiev Medical University, okuyinto minyaka yonke ivula iminyango zayo kuphela iziqu ezikoleni Ukrainian, kodwa futhi abameleli kwamanye amazwe.
Umholi imfundo yezokwelapha kuleli zwe
Indawo yokuqala ubizwa kufanele inikezwe omunye kanye amanyuvesi endala ezweni, okuyinto Kiev National Medical University. Bogomolets.
Namuhla kuba esikoleni ngokukhethekile emsebenzini wokufundisa methodical nokunikeza yezokwelapha iphrofayela ukuqeqeshwa. Kiev Medical University Bogomolets temabhodlela simo amanyuvesi Ukrainian isiqondiso wezokwelapha. Lapha ukulungiselela nodokotela bezingane, odokotela bamazinyo, osokhemisi, beauticians, odokotela bengqondo yezokwelapha, nokunye. D.
Inqubo zemfundo eyunivesithi Kwenziwa ayizinkulungwane 1.2 othisha, phakathi okuyinto 65 bangamalungu Ukraine Academy of Sciences futhi 35 angaphandle, 45 phezu -. Amalungu okusebenzayo kwe Izinyunyana ngamazwe yesayensi kanye nezinhlangano. Kukhona amalungu ubuhlakani kanye Prize ka umklomelo isimo, kanye izibalo avelele emkhakheni wezemfundo, okusunguliwe, isayensi nobuchwepheshe. amalungu Ukuphumelela omphakathi othisha ephawula imfanelo University ezingeni, futhi kuhlanganisa:
145 oprofesa 192 odokotela wesayensi;
340 osolwazi umhlobo futhi 719 ukhetho wesayensi.
Kukhona ifomu kwesabelomali kanye inkontileka yokuqeqesha, izindawo zokulala. Qhubeka uhlakulela bebheke umsebenzi yesayensi kuzokwenza izifundo postgraduate kanye zobudokotela zochwepheshe ezahlukene iphrofayli wezokwelapha. Le nyuvesi has a esigcwele futhi ukubhalelana izinhlobo ukuqeqeshwa.
Luqala ngokunikela idokhumenti esayinwe uMbusi uNicholas mina ngo-1840 ukuthi University of Kiev nokuvula uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha. Isidingo sokuba isinqumo esinjalo inkosi ngenxa yezizathu eziningana. Esokuqala kwaba ukuthi ekhatsi Kiev zidluliselwe Vilna Academy, elalisendlini Wilno (namuhla Vilnius). Owesibili kwaba ngenxa ukufuneka kakhulu odokotela, okuyinto zaba zimbi noma nini nalolu bhubhane kwaqala futhi impi.
Izinkulumo wokuqala kwaqala ngo-September 1841. Ngakho kwaba khona uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha we Kiev-University of St. uVladimir. Okwesikhathi esithile wahlala a division of University. Isimo esizimele semfundo wathola kamuva kakhulu - ngo-1920. Khona-ke, ngaphansi kwegama Institute of Public Health neminyango yezokwelapha eziningana bahlanganiswe, elise amanyuvesi ahlukene nezikhungo. Lesakhiwo elalisanda kumiswa izikhathi eziningana yashintsha igama layo kuze kube yilapho ngo-1921 alizange libe Kiev Medical Institute.
Ngesikhathi sempi, i-Institute waxoshelwa Chelyabinsk, kodwa kakade ngo-1943, amakilasi yaphinde yaqhubeka. Enye usuku olubalulekile emlandweni we nyuvesi kuyinto ukwabela igama Aleksandra Bogomoltsa. Izinguquko zakamuva egameni nyuvesi enziwa 1995 - lapho ethola isimo kazwelonke.
Kiev Medical University yaqanjwa Bogomolets kuhlanganisa amandla nambili, okuyinto ziqeqeshwe ukuze zikwazi odokotela ezindaweni ezihlukahlukene umsebenzi:
amakhono ezine wezokwelapha, okuyinto ukuqeqesha odokotela, gynecologists, nodokotela bezingane, internists, immunologists, nokunye nokunye..;
Zamazinyo: lapha, ngokuhambisana isiqondiso, ake odokotela abahlinzayo, odokotela bezingane, Orthodontists, njll;..
Pharmaceutical: lapha ungaba wemithi hhayi kuphela, kodwa futhi beautician;
uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha nezingokwengqondo silungiselela zokusebenza kwengqondo wezokwelapha.
Ngaphezu ukuqeqeshwa, kukhona ithuba bathuthukise amakhono abo ngesikhathi ubuhlakani ezifanele. Kukhona iyunithi okhuluma abafundi angaphandle ukufunda inhlangano.
Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi Kiev National Medical University futhi ulungisa futhi odokotela lempi. Lokhu amadili ne ubuhlakani ukulungiselela ongoti bezokwelapha for amabutho ahlomile.
Kangakanani inqubo yokufunda
Kiev Medical University yaqanjwa Bogomolets usinikeza ukuqeqeshwa kusistimu lesikweletu Modular, efana amayunivesithi amaningi kuleli zwe. Nokho, ezinye izifundo eziphezulu amandla zigcinwe kwendlela eyejwayelekile ukuqeqeshwa. Lezi zihlanganisa kunodokotela, odokotela bamazinyo kanye zokusebenza kwengqondo.
Inqubo yemfundo wenziwa ngezindlela ezihlukahlukene:
ekilasini - ngesimo izinkulumo, izingqungquthela kanye nokubonisana;
ngabanye - lapha kufanele asebenze ngokuzimela imisebenzi efana emlandweni wezokwelapha, forensics izenzo, njll;..
self - umfundi ekhetha omunye izifundo kobuholi, okuyinto uhlola uqobo;
esisebenzayo - kukhona lutholwa nakho olukhulu, kulezi zifundo ungentiwa ngaphandle eyunivesithi noma yisiphi isikhungo wezokwelapha;
izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba zokulawula.
Lokhu umbandela ngokomongo kwembulunga yonke kuyinto lunqume kakhulu ekuthuthukeni eyunivesithi. Kiev National Medical University isebenza kulesi siqondiso. Le nyuvesi elibamba izingqungquthela, symposia, workshop kanye namafomu. Exchange of kokubili abafundi kanye nothisha ukuze kuthuthukiswe ukubambisana okwengeziwe futhi ukusetshenziswa kwezinhlelo ezahlukene zomhlaba wonke.
University eba nokubambisana ezintweni ezenziwa ahlukahlukene-World Health Organization. Ayizange iphumelele ukunaka kwakhe isikhungo nokubambisana izikhungo international imfundo, nokunikeza nokuxhumana emazweni ahlukahlukene aseYurophu, kuhlanganise neJalimane-Italy, ePoland nokunye. D. Siyaphakama ehilelekile baseyunivesithi EC amaphrojekthi ezifana Erazmusundus kanye time. Zakha izimo ukuhamba kokubili kubafundi nothisha of izikhungo zemfundo ephakeme lamazwe ahlukahlukene ilungu. Enye zinhlelo amaphrojekthi iwukuba bahlanganyele sesimanje, okuyokwenza eyunivesithi ngoba efuna ukuba sithole lokuncintisana emakethe imfundo ngamazwe.
Yiqiniso, i-University yokuqhosha isiqinisekiso sokuthi is singachithi khona isikhathi. Among the ntu odume kunabo bonke abaye bathweswa iziqu Kiev Medical University yaqanjwa Bogomolets - udokotela ohlinza inhliziyo futhi umbhali UNikolai Amosov, wemidlalo futhi udokotela ekuzibandakanyeni, UMikhail Bulgakov, academician nomongameli Academy of Sciences of USSR Alexander Bogomolets, okuyinto yaqanjwa University namuhla. Kukhona phakathi abathweswe iziqu oluvelele kanye nabamele isonto. Lokhu kusho u-Archbishop Luka, emhlabeni eyaziwa ngokuthi Valentin F. Voyno-Yasenetsky. Kodwa yena wayengekho kuphela iziqu University, kodwa futhi udokotela ohlinzayo owaziwayo, ngekhono kuhlanganiswe umsebenzi wayo wokuziphilisa ekukhonzeni uNkulunkulu.
Futhi yena uyakhazinyuliswa alma yakhe Mater Nodokotela of Medicine UProfesa Eugene Chazov, owayehola ocwaningweni lakhe emkhakheni nezenhliziyo.
Ahambisanayo kanye Traditional Medicine eNyuvesi
Ngaphezu amayunivesithi isimo, Kiev Medical University ethulwa futhi kwenye yamanyuvesi yangasese. engavamile yayo wukuthi lapha ihlanganisa amazinga isimo imfundo wezokwelapha kanye umkhuba ngempumelelo kakhulu futhi kungase kutholakale izindlela yendabuko futhi non-bendabuko yokwelashwa.
Njalo is Kyïv Medical University of UAFM (CMU UANM). Isifushaniso esithi efihla Ukraine Academy of Folk imithi.
Umqondo liqine University iphuma umsunguli wayo Valery Pokanevich ku nineties zakuqala. Ukusebenzisa nemikhuba ehlukahlukene abantu, Ezigcwalisiwe Doctor Ukraine waphawula kanjani impumelelo yabo komculo umqondo wakhe ngo-1992, ukudala Kiev Medical University of Traditional UANM Medicine ezisekelwe.
Inqubo yemfundo Kwenziwa neminyango emithathu
Medical - lapha bafundiswa evamile ekuqhutshweni ezelaphayo;
Yamazinyo, esiqeqesha odokotela bamazinyo;
Pharmaceutical - ukulungiselela, ngokulandelana, osokhemisi.
Isici kulesi sikole ukuthi lapha ukuqeqeshwa kuhlanganisiwe block of eyala ku bendabuko kanye imithi ehlukile. Lesi sakamuva kuhlanganisa izinto ezifana: isixazululi nkinga yehadiwe nezinsiza, iridology, ukwelashwa massage and reflexology phakathi kwabanye. Le nhlanganisela ihlinzeka kwatheleka kakhulu abafundi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izikhungo zemfundo yalolu hlobo kukhona hhayi kuphela e-Ukraine, kodwa kulo lonke izwe elaliyiSoviet Union ngaphambili ngisho e-Europe. Kodwa zikhona izibonelo izinhlangano ezinjalo e-United States, i-China ne-Canada.
Waqaphela ngesimo iqhaza ezinhlelweni ezehlukene ngamazwe namaphrojekthi. Namuhla University isebenza izinhlangano Intercollegiate futhi igcina izixhumanisi nezikhungo zemfundo emazweni anjenge Poland, eJalimane, e-Russia, Greece nase-United States.
University co-umhleli CIRCEOS isakhiwo, elifuna ukuqinisekisa ukubambisana ucwaningo emkhakheni wezokwelapha.
abafundi University iminyaka eminingana iqhaza ezinhlelweni zamazwe ngamazwe ukuthi ahlinzeke umsebenzi ukubekwa phesheya isikhathi seholide. Amagama lezi zinhlelo azikhulumele: "yesevisi Ukuthula", "Abahlengikazi e-United States."
Ubuntu adumile University
Naphezu esifushane khona, inyuvesi ephethwe ukukhulisa eziningi nosaziwayo, phakathi lapho kukhona Doctor ahlonishwe of Ukraine, isayensi nobuchwepheshe abaholi, abawinile zokuhlonipha we imiklomelo State, udokotela wesayensi kanye netifundziswa. Phakathi kwabo: Ezigcwalisiwe Doctor Ukraine Zoya Veselovskaya futhi Vasily Melnik, Ezigcwalisiwe Science and Technology Georgiy Gayko futhi Basil Timofeev futhi uVladimir Skiba, ngubani ngaphandle izihloko futhi umklomelo we Prize State Ukraine. Ikakhulukazi abafundi ahlonishwe Umphathi wabo - Viktor Tumanov, ngubani ngaphandle iqoqo izihloko esikhethekile zokuhlonipha yaklonyeliswa Order of Merit emkhakheni wezemfundo.
Yini edingekayo ukuze Ukwemukelwa esikoleni sezokwelapha
Ngakho, Kiev Medical University ezidume azizange nje ukuhlinzeka izinga imfundo ephakeme, kodwa futhi ahlinzeke ithuba ukuze ubambe iqhaza kumaphrojekthi ngamazwe nezinhlelo enze kube nokwenzeka ukuba uqhubeke imfundo yabo iziqu kanye izifundo zobudokotela.
Yini odinga ukukwazi ukuze ukuya Kiev Medical University? 2015 th akuhlukile ngokuya nezidingo kuvulwa ngonyaka ozayo, ngakho yabanesithakazelo bangase bakhethe ukuthola lonke ulwazi kwi website lesikhungo.
Okokuqala, udinga ukucacisa lapho izitifiketi sangaphandle ukuhlolwa kutawudzingeka yokwemukela nabezokwelapha. Ngaphezu ngolimi Ukraine nezincwadi, ngokuvamile kudingeka ukuba kudlule biology, i-physics noma yokuthakwa kwamakhemikhali - ngesisekelo lunye. Kwesinye isikhathi kuthatha ama-biology kuphela, uma ufuna ukungena Pediatrics, imithi noma kwengqondo wezokwelapha. Ukuze abe wamazinyo, kudingeka kudlule kakhulu futhi physics.
Kuyacaca ukuthi Kiev Medical University inhloko-dolobha yase-Ukraine, kodwa amakheli ekomidini Ukukhetha kwabo ukwazi umfundi abazoba awukwazi ubuhlungu.
Ngakho, i-University of Bogomolets sise Boulevard Shevchenko, 13, imithi yendabuko - emgwaqweni Lva Tolstogo, 9.
Uma nazo zonke siyaqonda amakhilomitha amaningi kanjani imayela elilodwa
Le ndawo yase-China. China: labantu, endaweni. I kwabantu labantu eChina